အမေရိကန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာအပြီး ဥရောပ၂၆နိုင်ငံက ခရီးသည်တွေကို စတင်ပိတ်ပင်
အမေရိကန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြ...
14 มี.ค. 2563 - 18:55 น.
ရှန်ဂန်ဧရိယာကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်အတွင်း သွားထားတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား မဟုတ်သူ အားလုံးကို အမေရိကန် လာရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်တဲ့ အနေနဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ ဥရောပ ၂၆ နိုင်ငံကို ခရီးသွားပိတ်ပင်မှုဟာ မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့မှာ စတင် အသက်ဝင်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ၂၆ နိုင်ငံဟာ လွတ်လပ်စွာ ခရီးသွားနိုင်တဲ့ ရှန်ဂန်ဧရိယာက နိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီး အဲဒီနိုင်ငံသားတွေသာမက ဒီ နိုင်ငံတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်အတွင်း သွားထားတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား မဟုတ်သူ အားလုံးကို အမေရိကန်ကို လာရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်တဲ့ အရေအတွက် ၂၀ဝ၀ နီးပါးရှိပြီး သေဆုံးသူ ၄၃ ဦး ရှိနေရာမှာ မစ္စတာ ထရမ့်က ဒီအတွက် နိုင်ငံတော် အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာထားပြီး ဒီကိစ္စအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ဘီလျံ ၅၀ ကူညီရေး ရန်ပုံငွေလည်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် နဲ့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အာရှက အမျိုးသမီးတွေအပေါ် ထိခိုက်လာမှုတွေ
ဥရောပသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ပိုင်းကတော့ အမေရိကန်သမ္မတ ထရမ့်ဟာ တိုင်ပင်မှုမရှိပဲ ခရီးသွားပိတ်ပင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲ ဝေဖန်
အမေရိကန်ရဲ့ ခရီးသွား ပိတ်ပင်မှု
ရှန်ဂန်ဧရိယာအတွင်းမှာရှိတဲ့ ၂၆ နိုင်ငံကို မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က စပြီး ရက် ၃၀ ခရီးသွား ပိတ်ပင်ထားမှာ ဖြစ်ပြီး ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ ၂၂ နိုင်ငံနဲ့ အီးယူအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့ ၄ နိုင်ငံ ပါဝင်ပါတယ်။
အဲဒီ နိုင်ငံတွေကတော့ သြစတြီးယား၊ ဘယ်လ်ဂျီယန်၊ ချက်၊ ဒိန်းမတ်၊ အက်စ်တိုးနီးယား၊ ဖင်လန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ ဂရိ၊ ဟန်ဂေရီ၊ အိုက်စလန်၊ အီတလီ၊ လက်ဗီးယား၊ လစ်တန်စတိုင်း၊ လစ်သူရေးနီးယား၊ လပ်ဇမ်ဘတ်ဂ်၊ မော်လ်တာ၊ နယ်သာလန်၊ နော်ဝေး၊ ပိုလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ဆလိုဗက်ကီးယား၊ ဆလိုဗေးနီးယား၊ စပိန်၊ ဆွီဒင်နဲ့ ဆွစ်ဇာလန်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ပိတ်ပင်ခံရတဲ့ နိုင်ငံတွေထဲမှာ ယူကေနဲ့ အိုင်ယာလန်တို့ မပါဝင်ပေမယ့် အထူးသဖြင့် ယူကေမှာ ၂၄ နာရီအတွင်း ရောဂါကူးသူ တွေ့ရှိရမှု တက်လာနေတဲ့အတွက် ပြန်လည် သုံးသပ် ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့လည်း မစ္စတာ ထရမ့်က ပြောပါတယ်။
ဥရောပသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ပိုင်းကတော့ အမေရိကန်သမ္မတ ထရမ့်ဟာ တိုင်ပင်မှုမရှိပဲ ခရီးသွားပိတ်ပင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲ ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။
အမေရိကန်ဆေးရုံတွေကိုလည်း သူတို့ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အရေးပေါ် စီမံချက်တွေကို စတင် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အာဏာပိုင်တွေက တိုက်တွန်း
အမေရိကန်ရဲ့ နိုင်ငံတော် အရေးပေါ် အခြေအနေ
အမေရိကန်မှာ ကြေညာလိုက်တဲ့ နိုင်ငံတော် အရေးပေါ် အခြေအနေအရ အမေရိကန်မှာ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ လိုက်လျောညီထွေ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ဖို့အတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး အဲလက်စ် အဇာနဲ့ တကွ ကျန်းမာရေး အရာရှိတွေက တချို့ ဥပဒေ ကန့်သတ်ချက်နဲ့ လိုင်စင် လိုအပ်ချက်တွေကို လျှော့ပေါ့ ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆေးရုံတွေကိုလည်း သူတို့ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အရေးပေါ် စီမံချက်တွေကို စတင် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အာဏာပိုင်တွေက တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး နောက်တပတ် အစောပိုင်းမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စစ်ဆေးကိရိယာ နောက်ထပ် ငါးသိန်း အသင့်ဖြစ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဓါတ်ခွဲခန်းတွေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးဖော်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေဘက်ကလည်း ဒီဗိုင်းရပ်စ် စစ်ဆေးကိရိယာ ငါးသန်း အသင့်ဖြစ်မယ်လို့ ဆိုပေမယ့် ရောဂါလက္ခဏာ မပြပဲ၊ တကယ်စစ်ဖို့ မလိုအပ်ပဲ မစစ်ကြဖို့ အာဏာပိုင်တွေက တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတလွှား တက္ကသိုလ်နဲ့ကောလိပ်တွေကို လက်ရှိပိတ်ထားလိုက်ရာမှာ ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းလခအတွက် ချေးငှားရတဲ့ ငွေအတွက် အတိုးနှုန်း သတ်မှတ်မှုကို ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ဆိုင်းငံ့ထားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခုလို နိုင်ငံတော် အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာလို့ အစိုးရထောက်ပံ့တဲ့ ကျန်းမာရေး အာမခံပေးဖို့ အကျုံးဝင်သူ အရေအတွက် ပိုများလာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားမှု အများဆုံး ပြည်နယ်တွေနဲ့ ကွန်ဂရက်က ဒီမိုကရက်တွေက အရေးပေါ် ကြေညာပေးဖို့ မစ္စတာ ထရမ့်ကို တောင်းဆိုနေခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားမှုဒဏ်ကို ခံရသူတွေအတွက် ဆေးခွင့် ၂ ပတ်ပေးဖို့၊ မိသားစု ဆေးခွင့် သုံးလအထိ ပေးဖို့နဲ့ ကျန်းမာရေး အာမခံ မတတ်နိုင်သူတွေကို အခမဲ့ စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ အစားအသောက် ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ စတဲ့ အစီအစဉ်အတွက် အမေရိကန် အိမ်ဖြူတော်နဲ့ သဘောတူညီမှု ရခဲ့တယ်လို့လည်း အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ နန်စီ ပယ်လိုစီက မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
မတ်လ ၁၄ ရက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် နိုင်ငံတကာ အခြေအနေ
နယူးဇီလန်နိုင်ငံကို မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့က စပြီး ဝင်လာတဲ့သူတိုင်း ၁၄ ရက် သီးခြားခွဲနေရမယ်လို့ နယူးဇီလန် ဝန်ကြီးချုပ် ဂျက်ဆင်ဒါ အာဒန်က ကြေညာလိုက်ပြီး တောင်ပိုင်း ပစိဖိတ်ကျွန်းက လာသူတွေကိုတော့ ချွင်းချက်ထားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နေကြောင်း အတည်ပြုနိုင်သူ ၂၀ဝ အထိ ရှိလာပြီ ဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူ ၃ ဦး ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်တနိုင်ငံလုံးမှာတော့ လတ်တလော ၂၄ နာရီအတွင်း ရောဂါကူးစက်မှု အသစ် ၁၁ ခုနဲ့ သေဆုံးသူ ၁၃ ယောက် ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့ နေ့စဉ် ရောဂါကူးစက်မှု အသစ် အရေအတွက်က သက်သာလာသူ အရေအတွက်ထက် ၂ ရက် ဆက်တိုက် နည်းလာပြီး လတ်တလော ၂၄ နာရီအတွင်း သက်သာလာသူ ၂၀၄ ဦးရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံကတော့ မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ ဒေသစံတော်ချိန် မနက် ငါးနာရီကစပြီး ဥရောပနဲ့ အာရှကို ခရီးသွားထားသူ မှန်သမျှကို ပြည်ဝင်ခွင့် ပိတ်လိုက်ပြီး ဗင်နီဇွဲလားနဲ့လည်း နယ်စပ်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။
ယူကေနိုင်ငံမှာတော့ လူအများစုဝေးတဲ့ အခမ်းအနား မှန်သမျှကို နောက်တပတ်ကစပြီး ပိတ်ပင်ဖို့အတွက် အစိုးရဝန်ကြီးတွေက အစီအစဉ်ဆွဲနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အမေရိကန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာအပြီး ဥရောပ၂၆နိုင်ငံက ခရီးသည်တွေကို စတင်ပိတ်ပင်